တရုတ်မှမွန်ဂိုလီးယားထုတ်လုပ်သူများထံစိတ်ကြိုက်ပင်လယ် buckthorn ခြောက်သွေ့စက် | Twesix
Twesix သည်တရုတ်နိုင်ငံမှမွန်ဂိုလီးယားထုတ်လုပ်သူများထံမှမွန်ဂိုလီးယားထုတ်လုပ်သူများထံမှ စ. မွန်ဂိုလီးယားထုတ်လုပ်သူများထံမှလက်မှတ်များစွာကိုဖြတ်သန်းသွားခဲ့သည်
စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း - သင်၏အချိန်နှင့်ခွန်အားကို Twsix ပင်လယ် buckthorn ခြောက်သွေ့စက်ဖြင့်သိမ်းဆည်းပါ။ သင်၏ပင်လယ် buckthorns ကိုခြောက်သွေ့စေရန်နာရီများစွာကြာပြီးသင်၏အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ Twsix Sea Buckthorn ခြောက်သွေ့စက်သည်ခြောက်သွေ့သောစက်သစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသစ်သီးခြောက်သွေ့မှုနည်းပညာလျှောက်လွှာမှ Twsix ကုမ္ပဏီမှတီထွင်ထားသောခြောက်သွေ့သောစက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသစ်သီးခြောက်သွေ့ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ထားသည် - ခြောက်သွေ့သောအသီးများ, သင်ဤစက်ကို သုံး. ရေနံခြောက်သွေ့သောပင်လယ် buckthorn သို့သုံးနိုင်သည်။ စက်သည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ခြောက်သွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအချိန်တိုအတွင်းပြုလုပ်ပြီးသင်၏အချိန်နှင့်ငွေကိုချွေတာခြင်းဖြစ်သည်။
Sea Buckthorn ခြောက်သွေ့စက်သည်စွမ်းအင်, လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ထားပြီးအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Sea Buckthorn ခြောက်သွေ့စက်ကိုမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပဒေသများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
လေထုအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်ကိုအသီး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, ပင်လယ်စာ, အသားများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ရိုးရာခြောက်သွေ့စက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည် 60 မှ 70% စွမ်းအင်ကိုသက်သာစေပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေနိုင်ပါ။
Tsix အစားအစာခြောက်သွေ့စက်များကိုအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအရတင်းကြပ်စွာထုတ်လုပ်သည်။ မတင်ပို့မီစက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လက်မှတ်များနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများရှိသည်
MOQ သည် 1 ယူနစ်ဖြစ်သည်
1.copeland compressor နှင့် Schneider အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ
စက်များနှင့်ခြောက်သွေ့သောအတွေ့အကြုံများတွင် 2.technical ပံ့ပိုးမှု
2014 ခုနှစ်မှစ. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစားအစာခြောက်သွေ့စက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်အစားအစာခြောက်သွေ့ခြင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းပေးသူအား 2014 ခုနှစ်မှစ. "Tsix" စီးရီးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သောက်သုံးရေအတွက်ရေအရင်းအမြစ်အပူပေးစက်များကဲ့သို့သော "Tsix" စီးရီးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်လေထုရေစိုခံခြင်းစုပ်စက်များနှင့်ရေအရင်းအမြစ်များကိုသောက်သုံးခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်များသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ, သြစတြေးလျ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အိန္ဒိယ, စင်ကာပူ, ထိုင်း, မလေးရှား, ဘရာဇီး, ဘရာဇီး, ရုရှားနှင့်တောင်အာဖရိက, ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏0န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်အရည်အသွေးကိုအာမခံသောစက်များ၏စွမ်းရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်နိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းများရှိသည်။